घोराहीमा विशेषज्ञ सेवासहित बुद्ध हस्पिटल सञ्चालन – Janaubhar
घोराहीमा विशेषज्ञ सेवासहित बुद्ध हस्पिटल सञ्चालन
प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस १९, २०७४ | 292 Views ||
घोराही । दाङको घोराहीमा विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । घोराही–१५ सडक विभागको ओरालोमा बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रालिले विषेशज्ञसहितको सेवा सुरु गरेको छ ।
स्वास्थ्यसहित बिभिन्न क्षेत्रका ६ जना व्यक्तिहरुको करिब ३ करोड रुपैयाँको लगानीमा उक्त हस्पिटल सञ्चालनमा आएको डा. रमेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । हस्पिटलले इमर्जेन्सी, ओपिडी, भर्ना, डिजिटल एक्सरे, अप्रेशन, ल्याबसहित फार्मेसी सेवा समेत दिन थालेको छ ।
चौबिसै घण्टा सेवा दिने गरि हस्पिटल सञ्चालन गरिएको लगानीकर्ता समेत रहनुभएका डा. बस्नेतको भनाई छ । दूरविन बिधिबाट पत्थरीको अप्रेसन, पिसाब नली, पिसाब थैलीको पत्थरीको अप्रेसन गर्न थालिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
हर्निया, एपेण्डीक्स, पायल्स, फिष्टुलाको अप्रेसनसहितको सेवा हस्पिटलले सुरु गरेको जनाएको छ । हस्पिटलमा बरिष्ठ कन्सल्टेन्सी सर्जन डा. रमेश बस्नेत, अप्रेसनका लागि बेहोस पार्न डा. सुरेन्द्र कुँवर, भिडियो एक्सरेका लागि डा. रामेश्वर देवकोटा, स्त्रीरोग बिशेषज्ञका लागि डा. बसन्त लामिछाने र हाडजोर्नी सम्बन्धी डा. अनिल यादवको चिकित्सकको टिम रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट हस्पिटल सञ्चालन गरिए पनि व्यवसाय नभई सेवाभावलाई प्राथमिकता दिईएको डा. बस्नेतको भनाई रहेको छ । हस्पिटलमा बिरामी भर्ना गरेर उपचार र अप्रेसन गरेर समेत उपचारको काम सुरु भएको छ ।
Prevकांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दिनँः प्रचण्ड
Nextनिर्वाचनका लागि दाङमा झण्डै ७ करोड खर्च